GOLAHA DEEGANKA DEGMADA SHEEKH OO LAGU EEDEYNAYO BOOB AY KUHAYAAN DHISMAYAASHII DAWLADAN IYO GURIGA MARTIDA DEGMADA OO LA BALOODHEEYAY DHISMENA KA SOCDO | Saxil News Network
GOLAHA DEEGANKA DEGMADA SHEEKH OO LAGU EEDEYNAYO BOOB AY KUHAYAAN DHISMAYAASHII DAWLADAN IYO GURIGA MARTIDA DEGMADA OO LA BALOODHEEYAY DHISMENA KA SOCDO
February 17, 2015 - Written by admin
Hargeysa(Berberatoday.com)-Golaha Deegaanka Degmada Sheikh, ayaa lagu eeddeeyay inay sifo sharci-daro ah ku iibiyeen Dhul muhiim ah oo ku kala yaalla gudaha Magaalada iyo meello ka baxsan, balse aan masaafo sidaas u fog u jirin.
Illaa afar goobood oo istaraatiijiya ayaa la sheegay inay xubno kamida Xildhibaanada Deegaanka oo uu Maayirku hogaaminayaan ka faasaxeen Ashkhaas iyo Shirkaddo Ganacsi, kuwaasoo goobaha la siiyey qaarkood shacbiga ku dhaqan Magaaladu si weyn uga biyo-diideen.
Dhulka la iibiyey, ayaa waxa mida halkii ay ahaan jirtay xaruntii Hannuuninta ee Dawladdii Siyaad Barre, qayb ka mid ah dhulka State house-ka Magaalada oo dhawaan Madaxweyne Siilaanyo dhagax dhigay Dhisme loogu talo-galay Guriga martida oo mar labaadkii rejo la’aan laga muujiyey dhismihiisa, Dhul balaadhan oo ku yaalla Xaafada Dayaxa ee Buurta saaran iyo Dhulka Shacabkii hore oo qayb ka mid ahi dhisantahay.
Dhismeyaal iyo Dhul banaan oo ku yaalla Xaafadda Shacabka ee badhtamaha Magaalada oo ay ka dhisanyihiin Guryihii Dawladdii Ingiriisku kaga tegtay oo dawlada hoose dib u dhis ku samaysay, kana kiraysay dad rayida, ayaa waxa wararku tibaaxeen inay dhowr qolo muddo hirdan ugu jireen, balse maalmihii u dambeeyay Lacag horumarin ah laga qaaday Nin la yidhaahdo Baashe Cabdilaahi oo Ganacsade ah, kaasoo ugu dhow in lagu wareejiyo goobtaas.
Xubno ka mida Dadka ku dhaqan Magaalada oo Wargeyska Yool la hadlay, ayaa sidoo kale tibaaxay in dhulka xaruntii Hannuuninta oo uu hada ku yaallo Garoon Dhalinyarada Kubbada ku ciyaarto uu wali gor-gortankeedu socdo, isla markaana Shirkaddo Ganacsi iyo dad kale oo maal-qabeenno ahiba baayaceen.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in Ololaha xaalufinta Dhulka danta guud ay horsed ka yihiin Maayirka Degmada iyo xubno ka mida xildhibaanada Xisbiga Kulmiye ugu jira Golaha Deegaanka ee Degmada, kuwaasoo lagu dhalliilayo inaan boobkoodu ahayn mid loo meel dayayo bogcadaha lama taabtaanka ah iyo kuwa ku san-banaan in la iibiyo hadii sifo kale loogaga faa’idaynayo shacbiga.
“Arrinta ugu daran ee aadka looga wer-wersanyahay waxa weeye Iibinta Garoonka Kubbada”sidaasi waxa Wargeyska Yool u sheegay Maxamed Cabdi Diiriye (Jeex) oo Shacbiga Deegaanka u hadlay, kana tirsan dadka sida xooggan uga soo horjeeda talaabooyinka lagu dhaxal-wareejinayo sida uu sheegay Danta Guud.
Dhanka kale, Dhulka ku yaalla buurta ka saraysa Xaafada Dayaxa oo la tuhunsanyahay inay macdani ku jirto, ayaa waxa laga Iibiyey Shirkad Shiinaha laga leeyahay oo ay hor-kacayaan Muwaadiniin u dhashay Somaliland, taasoo dhawaan laga raray Buuralayda Deegaanka Lafo-ruug oo ay muddo degenayd, balse khasab lagaga saaray halkaasi kaddib markii laga shakiyey ujeedada ay halkaas u degtay oo loo fasirtay Uruursi Macdanneed.
Ma cadda ilaa iyo Iminka Qiimaha ama Sicirka lagu kala iibsaday Dhowrkan bogcadood ee la sheegay inay faasaxeen Golaha Deegaanka Degmada Sheikh, hase-ahaatee warar kala duwan oo aanu ka helnay, ayaa intaas ku daraya in badankooda si hoose loo kala qaatay Lacagaha la kala siistay, taasoo sababtay in xataa xan lagu maqal xaddiga lacagaha la kala qaatay.
Geesta kale Guddoomiyaha Golaha Deegaanka iyo Xildhibaanada lagu eedeeyay Boobka dhul oo Wargeyska Yool isku-dayey inaanu dhinacooda wax ka waydiino dhaleecaymaha looga soo jeediyey Iibinta Dhulka danta Guuda, ayaanay noo suurto gelin, balse arrintan ayaa hadii ay noqoto sida Shacbiga Degmadu ku eedeeyey Golaha Deegaanka Degmada, ka hor-imanaysa Shuruucda Maamulka Dhulka oo ay inta badan kala riixdaan Wasaarrada Howlaha guud iyo Dawladdaha hoose, wallow Madaxweyne Siilaanyo hore uga soo saaray Wareegto uu Goleyaasha Deegaanka kaga madnuucayo ku tasarufka Dhulka danta guud nooca uu doonaba ha noqdee.
Inkasta oo ay dhici karto inay Wasaarrada Howla-guud lafteedu wax ka ogtahay qorshaha lagu iibiyey Dhulkaas, oo ay dhici karto in Masuuliyiinteeda heer Gobol ay ku daba dhuumanayaan Maamulka Dawladda hoose ee arrintaas faraha kula jira, si aanay uga dhex muuqan Wasaarad ahaan howshaas